ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပိုး ကူးစက်လာမယ့်အရေး စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတာကြောင့် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ဖြစ်တဲ့ ကမ်ချနဘူရီ နယ်စပ် ၊ ဘုရားသုံးဆူဒေသမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ကုန်တင်သွင်းမှု တွေကို ၁၄ရက် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး နယ်စပ်တလျောက် လမ်းတွေကိုလည်း ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မအေးအေးမာက ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ကမ်ချနဘူရီခရိုင် Sangkhlaburi မြို့နယ်စပ်၊ စစ်ဆေးရေးဂိတ် အပါအ၀င် ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ် လမ်းတလျှောက်က လူဝင်လူထွက် လမ်းတွေ လူနာတွေသွားလာနေတဲ့နေရာတွေအပြင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းတွေကို အောက်တိုဘာ ၅ ရက်အထိ ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့မှာ ကန်ချဘူရီခရိုင်အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုတွေရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အနီးအနားရှိမြို့တွေကို တားဆီး ပိတ်ပင်တဲ့ အမိန့်ကို ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Jirakiat Phumsawatက လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကန်ချနဘူရီခရိုင်နဲ့ တဖက် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့နဲ့ ၅ ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာတစ်ရွာတွင် နေထိုင်နေတဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်လူငယ် ဦးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိုင်းဘက်က စိုးရိမ်ူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ထိုင်းသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြနေတာပါ။
ခရိုင်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဌ လည်းဖြစ် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လည်းဖြစ်တဲ့ Jirakiat Phumsawat က ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကို သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ချိန်မှာအခုလိုပြောသွားပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံထဲက စိုးရိမ်စရာကောင်းနေတဲ့ ကိုဗစ်ပြန့်ပွားမူဟာအခုဆိုရင် နယ်စပ်ဒေသကိုရောက်လာပြီ ။ ဒီအခြေအနေကို ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအရ ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ် ကျနော်တို့ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ခြင်း ထိစပ်တဲ့နေရာ အားလုံးမှာ ကျနော်တို့ ပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့ မရပါဘူး။ ကျနော်တို့ထုတ်ပြန်သလိုပြည်သူတွေကလည်း တိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်” လို့ ထိုင်းဘာသာနဲ့ ပြောဆိုသွားတာပါ။
စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့က ကမ်ချနဘူရီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘုရားသုံးဆူမြို့ ကကိုဗစ်စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာဟာထိုင်းနိုင်ငံလူနေရပ်ကွက်နဲ့အလွန်နီးကပ်နေတာရယ် အခုရက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း ရောဂါကူးစက်မူတွေက ရာဂဏန်းအထက် မြင့်တက်လာနေတာကြောင့် အဆိုးဆုံးဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေတွေကို ဒေသအာဏာပိုင်တွေကကြိုတင် ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို တားမြစ်ပိတ်ပင်ချက်အရဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ် ထိုင်းဘက်ခြမ်းမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ခရီးသွား လုပ်ငန်း များ အားလုံး ပိတ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် နယ်စပ်ကျေးရွာတွေကကျန်းမာရေးဌာနကိုအကြောင်းမကြားပဲ လူနာများကို သယ်ဆောင်လာတာ ပြောင်းရွှေ့လာတာတွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို လက်ခံဆေးကုသပေးတာတွေကိုပါ မလုပ်ရဘူးလို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်တဲ့ သူတွေကိုတော့ တစ်နှစ်ထက် မပိုတဲ့ ထောင်ဒဏ်သို့မဟုတ်ဘတ် တသိန်း ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ကျခံရမှာ ဖြစ်ပြီးပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အမိန့် B.E. 2558 ပုဒ်မ ၁၈ အရအပြစ်ပေးခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ဘုရားသုံးဆူဒသေ နယျစပျဂိတျ ၁၄ ရကျ ပိတျ
ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ မှာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ပိုး ကူးစကျလာမယျ့အရေး စိုးရိမျမှုတှမွေငျ့တကျလာနတောကွောငျ့ ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ ဖွဈတဲ့ ကမျခနြဘူရီ နယျစပျ ၊ ဘုရားသုံးဆူဒသေမှာ စီးပှားရေးလုပျငနျးနဲ့ ကုနျတငျသှငျးမှု တှကေို ၁၄ရကျ ရပျဆိုငျးလိုကျပွီး နယျစပျတလြောကျ လမျးတှကေိုလညျး ပိတျလိုကျပါတယျ။ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျးသတငျးထောကျ မအေးအေးမာက ထိုငျးမွနျမာနယျစပျကနေ သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
ကမျခနြဘူရီခရိုငျ Sangkhlaburi မွို့နယျစပျစဈဆေးရေးဂိတျ အပါအဝငျ ဘုရားသုံးဆူနယျစပျ လမျးတလြှောကျက လူဝငျလူထှကျ လမျးတှေ လူနာတှသှေားလာနတေဲ့နရောတှအေပွငျ ကုနျစညျပို့ဆောငျနတေဲ့လမျးတှကေို အောကျတိုဘာ ၅ ရကျအထိ ပိတျပငျလိုကျကွောငျး စကျတငျဘာလ ၂၂ရကျနမှေ့ာ ကနျခဘြူရီခရိုငျအာဏာပိုငျတှကေ ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။
COVID-19 ပြံ့နှံ့မှုတှရှေိနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံ အနီးအနားရှိမွို့တှကေို တားဆီး ပိတျပငျတဲ့ အမိနျ့ကို ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး Jirakiat Phumsawatက လကျမှတျထိုးထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
ကနျခနြဘူရီခရိုငျနဲ့ တဖကျ မွနျမာနိုငျငံ၊ ဘုရားသုံးဆူမွို့နဲ့ ၅ ကီလိုမီတာအကှာမှာရှိတဲ့ ကြေးရှာတဈရှာတှငျ နထေိုငျနတေဲ့ အသကျ ၁၇ နှဈအရှယျလူငယျ ဦးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတှရှေိ့ကွောငျး မွနျမာနိုငျငံက သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ ထိုငျးဘကျက စိုးရိမျူတှဖွေဈလာခဲ့ကွောငျး ထိုငျးသတငျးတှမှော ဖျောပွနတောပါ။
ခရိုငျရောဂါထိနျးခြုပျရေးကျောမတီဥက်ကဌ လညျးဖွဈ ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး လညျးဖွဈတဲ့ Jirakiat Phumsawat က ထိုငျးမွနျမာနယျစပျကို သှားရောကျစဈဆေးခဲ့ခြိနျမှာအခုလိုပွောသှားပါတယျ။
“မွနျမာနိုငျငံထဲက စိုးရိမျစရာကောငျးနတေဲ့ ကိုဗဈပွနျ့ပှားမူဟာအခုဆိုရငျ နယျစပျဒသေကိုရောကျလာပွီ ။ ဒီအခွအေနကေို ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ ရောဂါထိနျးခြုပျရေးအရ ထုတျပွနျရတာဖွဈပါတယျ ကနြျောတို့ နှဈနိုငျငံနယျစပျခွငျး ထိစပျတဲ့နရော အားလုံးမှာ ကနြျောတို့ ပေါ့ပေါ့ဆဆနလေို့ မရပါဘူး။ ကနြျောတို့ထုတျပွနျသလိုပွညျသူတှကေလညျး တိတိကကြလြိုကျနာဖို့လိုပါတယျ” လို့ ထိုငျးဘာသာနဲ့ ပွောဆိုသှားတာပါ။
စကျတငျဘာလ ၂၂ရကျနကေ့ ကမျခနြဘူရီအုပျခြုပျရေးမှူးရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရ ဘုရားသုံးဆူမွို့ကကိုဗဈစောငျ့ကွညျ့ရေးစငျတာဟာထိုငျးနိုငျငံလူနရေပျကှကျနဲ့ အလှနျနီးကပျနတောရယျ အခုရကျပိုငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံတဝှမျး ရောဂါကူးစကျမူတှကေ ရာဂဏနျးအထကျ မွငျ့တကျလာနတောကွောငျ့ အဆိုးဆုံးဖွဈလာမယျ့အခွအေနတှေကေို ဒသေအာဏာပိုငျတှကေကွိုတငျ ကာကှယျရေးလုပျဆောငျတဲ့အနနေဲ့ ထုတျပွနျတာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီလို တားမွဈပိတျပငျခကျြအရဘုရားသုံးဆူ နယျစပျ ထိုငျးဘကျခွမျးမှာ ဖှငျ့ထားတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား ၊ ဈေးဆိုငျမြား၊ခရီးသှား လုပျငနျး မြား အားလုံး ပိတျထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါအပွငျ နယျစပျကြေးရှာတှကေကနျြးမာရေးဌာနကိုအကွောငျးမကွားပဲ လူနာမြားကို သယျဆောငျလာတာ ပွောငျးရှလေ့ာတာတှေ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို လကျခံဆေးကုသပေးတာတှကေိုပါ မလုပျရဘူးလို့ ထုတျပွနျထားပါတယျ။
ထုတျပွနျတဲ့ ဥပဒကေို ခြိုးဖေါကျတဲ့ သူတှကေိုတော့ တဈနှဈထကျ မပိုတဲ့ ထောငျဒဏျသို့မဟုတျဘတျ တသိနျး ထကျမပိုသော ငှဒေဏျကခြံရမှာ ဖွဈပွီးပွညျသူ့စီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာအရေးပျေါအမိနျ့ B.E. 2558 ပုဒျမ ၁၈ အရအပွဈပေးခံရမှာဖွဈတယျလို့လညျးဆိုပါတယျ။